नि: शुल्क वेबिनार उपकरण र प्रत्यक्ष स्ट्रीमिing प्लेटफार्म | ULIVE
नि: शुल्क वेबिनार उपकरण
प्रत्यक्ष कार्यशाला होस्ट गर्नुहोस् र प्रति दृश्य पैसा कमाउनुहोस्। भाइरल सामग्री पोस्ट गर्नुहोस् र तपाईंको दर्शक बनाउनुहोस्।
U LIVE वेबिनारहरू र अन्तर्क्रियात्मक शोहरूका लागि लोकप्रिय लाइभ स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म हो। प्रत्यक्ष जानुहोस्, उत्तम सामग्री साझा गर्नुहोस् र प्रति दृश्य पैसा कमाउनुहोस् र जब कोही तपाईंको पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्दछ।
तपाईंले कमाउनु भएको जति पाउनुहोस्
कुनै सामग्री शुल्क निर्माता तपाईं को रूपमा लागू गरीएको छैन। हामी तपाईंको आय तेस्रो पक्षहरूसँग साझेदारी गर्दैनौं।
ULIVE क्रस-प्लेटफर्म हो
अनुप्रयोगले सबै उपकरणहरूमा कार्य गर्दछ: डेस्कटप, ल्यापटप, ट्याब्लेट र स्मार्टफोन। तपाइँको लक्षित श्रोतालाई प्रभावकारी रूपमा पुग्नुहोस्!
मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताहरू
दर्शकको बृद्धि प्रति महिना
सामग्री अवलोकनबाट औसत मासिक आम्दानी
विश्वसँग केही राम्रो साझा गर्नुहोस् र यसको लागि भुक्तानी गर्नुहोस्
तपाइँको दर्शक निर्माणको साथ सुरू गर्नुहोस्। लोकप्रिय हुन र दर्शक वृद्धि गर्न पहिले केहि निःशुल्क र उपयोगी सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस्। तपाईको दर्शकहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। तपाईंको सामग्री प्रचार गर्न र पैसा कमाउन प्रत्यक्ष जानुहोस्!
केही वफादार दर्शकहरूको निर्माण पछि उनीहरूको लागि अत्यन्त मूल्यवान केहि पोष्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको आमदनी बढाउनको लागि भुक्तान गर्नुहोस् वा श्रोताको लागि ठूलो भएमा नि: शुल्क साझेदारी गर्नुहोस्।
निजी प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू
लाइभ जानुहोस् र केही मूल्यवान जानकारी साझा गर्न तपाईंको स्ट्रिम निजी बनाउनुहोस्। स्ट्रिमको हरेक मिनेटको लागि भुक्तान गर्नुहोस्।
प्रति दृश्य प्रसारक भुक्तान गर्नुहोस्
तपाईं एक बहुमूल्य सामग्रीको साथ निष्क्रिय आय बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ। सबै भिडियोहरू र तस्बिरहरू तपाईं लाई पैसा ल्याउँदछ हरेक पटक तिनीहरू हेरिन्छन्।
लिपि अनुसरण गर्नुहोस्
तपाईं प्रिसेटहरू मध्ये एक छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष स्ट्रिमको बखत तदनुसार कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। सबै प्रिसेटहरूमा अनौंठो कार्यहरू छन् जुन तपाईंले प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।
दान र उपहार
प्रयोगकर्ताहरू सिक्का पठाउँदै सर्वश्रेष्ठ स्ट्रिमरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छन्।
हामीलाई न त तेस्रो पक्षहरूसँग तपाईंको व्यक्तिगत डेटा साझेदारी गर्न वा साझेदारी गर्न आवश्यक छ। केवल प्रमाणित गर्नुहोस् कि तपाईं हामीसँग १ ear जनासँगै कमाई सुरु गर्न १ already वर्ष भइसक्यो।
अनावश्यक ध्यान रोक्नको लागि विशेष देशहरू र क्षेत्रहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्।
विश्व संग महान सामग्री साझा गर्नुहोस्
U LIVE ले अहिलेसम्म १२ भाषाहरूलाई समर्थन गर्दछ (अधिक भाषाहरू समर्थित हुन)। अनुप्रयोग २1१ देशहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिश, चेक, रूसी, टर्की, जापानी, हिब्रू, अरबी, इटालियन र डच।
सबै लिखित सामग्री जुन तपाईं र तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले उत्पादन गर्दछ स्वचालित रूपमा अनुवाद हुनेछ। तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि विदेशी भाषा नबुझीकन प्रयोगकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईंको पहिलो प्रत्यक्ष स्ट्रिम सुरू गर्नुहोस्, यो सजिलो छ!
होस्टको रूपमा साइन अप गर्नुहोस् - यो सजिलो छ!
तपाइँको दर्शक निर्माण गर्न नि: शुल्क कार्यशाला र मास्टर वर्गहरू चलाउनुहोस्
बहुमूल्य सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईंको दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्
होस्टको रूपमा साइन अप गर्नुहोस्
प्रयोगका सर्तहरू गोपनीयता नीति समर्थन वेबिनारहरूमा कमाउनुहोस् एक सम्बद्ध बन्नुहोस् च्याट रूलेट विकल्प Affiliate agreement Creator agreement
U LIVE पाउनुहोस्
ब्राउजर iOS Android Huawei App Gallery